Muqdisho oo mar kale foolanaysa!! Tolow maxay Dhali doontaa??!
Yaaqshiid – Muqdisho
Waa maalin Axad ah taarikhduna waa 11/03/2007 . Waxaa laga joogaa laba bilood iyo 14 maalmood markii ay Ciidamada Itoobiya ay qabsadeen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo ay dumiyeen maamulkii Midowga maxkamadaha islaamiga oo ka jirey meelo badan oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya. Waa maalin kale oo magaalada Muqdisho ay hareeyey saxan-saxo colaadeed iyadoo la saadaalinayo inuu soo dhowyahay dagaal dhiig badani ku daato oo ay qaadi doonaan ciidama dowladda oo ay u dagaallamayaan ciidamada Itoobiya- ugaandha iyo ciidamo dowladda loo soo tababaray iyagoo wacad ku maray inay gacta marin doonaan dadka ka soo horjeeda!
Qabsashadii Muqdisho waxay beddeshay wajiga taariikhda soomaaliya iyadoo laga yaabo inay saameyn ku yeelato geeska Afrika oo dhan. Soomaaliya oo ay horey uga jireen kooxo xukunka isku haysta, waxay gashey marxalad “Haysasho” iyadoo dowlado badan ay si toos ah ugu lug yeesheen dagaallada waddanka halkii ay ka taageeri jireen kooxaha qaarkooda .
Haddaba magaalada Muqdisho oo ku magac yeelatay inay tahay meel ay ammaankeeda u tabar waayeen adddunka oo dhan marka laga reebo Midowgii Maxaakimta Islaamka, ayaa waxaa muuqata inay la soo baxday wax yaabo u keysanayaa oo aysan xisaabta ku darsan madaxda cusub iyo saxiibbadodii soo gelbiyey.
Maalmihii qabsiga ka dambeeyey dadka Muqdisho waxay billaabeen inay u dhegtaan waxa ay fali doonaan Itoobiyaanka iyo dowladda ay caawinaayeen iyagoo filaayey inay la imaan doonaan qorshe qanciya dadka intiisa badan (maadaama aan cid kasta la qancin karin). Hase yeeshee wax yar ka dib waxay dadku yaqiinsadeen in dowladda aysan u degsanayn wax qorshe ah oo aysan ka duwanayn dhagax culus oo sidii ‘duudka’ loogu siday magaalada la soo dhex-qotomiyey. Waxay si “is-tuuris” ah isugu dayeen inay dadka muqdisho uga faa’iidatstaan argaggaxii ka soo gaaray jabkii lama filaanka ahaa eek u yimid Maxaakimta, iyagoo ugu baaqay inay hubka ku dhigaan muddo 3 maalmood ah!! Taasoo fashil fool xun ku keentay hankii ay daku u qabeen dowladda. Markaas wixii ka dambeeyey waxaa billowday in “cadaw” loo arko dowladda iyo saaiibbadeed.
Dhacdooyin badan ka dib waxaa soo if-baxay qorshe ay dowladda ku meel gaarka ah ku doonayso inay ku maquuninayso kuwa aan ku qanacsanayn sida ay wax u waddo. Qorshahaas oo loogu magac daray soo celinta amaanka muqdisho, waxaa ka hor-maray olole xog-ururin iyo sir-doon isugu jirey, kaasoo inta badan sabab u ahaa dilalkii laga argagaxay ee ekeeyey magaalda Muqdisho una dhaxeeyey sir-doonka dowladda & Itoobiyaanka oo dhinac ah iyo kooxa iska-caabbinta oo dhac kale ah.
Labo ballan qaad!
Iyadoo qaddarta alle ay meesheeda tahay, Waxaa hadallo soo kala saaray kooxaha iska-cabbinta iyo dowladda ku meel gaarka iyadoo dhinac weliba uu ballan qaaday in uu ka guulaysan doono qolada ka soo horjeedda. Haddaba aan meel ku qoranno labadaas ballan qaad si (inteenna badbaada) ay ula socdaan cidda ballantooda ka dhabaysa!
“Waxaan ballan qaadaynaa in bishaan Maarso gudaheeda aan kuwa amaan darrada wada ka dhigo wax xabsi lugu rido iyo wax waddanka ka carara, si shirweynaha qaran loogu qbto magaalada Muqdisho oo nabad ah”
(Salaad Cali Jeelle-idaacadaha Muqdisho)
“Waxaa Ballan qaadaynaa haddii Allaah idmona in meydkooda la wari doono waddooyinka Muqdisho haddii aaney ka waantoobin oo ay isku soo mutuxaan fulinta awaamirta cadowga iyo calooshood u shaqeystayaashiisa niyadda xun”
Yaa la dagaallamaya dowlada iyo saaxiibbadeed?
Dadka wax fahma (iyo kuwa aann wax fahmin-ba) waxay ogyihiin in dadka saluugsan hab-dhaqanka dowladda ay aad uga badan yihiin kuwa ku qanacsan. Haddiise su’aashaan la waydiin lahaa DFKG waxaa la hubaa inay dhihi lahaayeen “waa haraadigii maxaakimta” ama “waa beeshii maxkamadaha ku qaraaban jirtey oo aan weli ka quusanin macashii ay barteen”.
Waa run inay weli jiraan dad ka mid ahaan jirey maxkamadihii oo ku jira (ama horsed ka ah) howlaha iska-caabbinta, waxaase xaqiiqdu tahay in dadka aan qanacsanayn ay aad uga tira badan yihiin intaas. Marka lugu daro maxkamadihii , waxaa jira dad uu ku jiro dareen qabiil oo aad uga wel-welsan soo daabulidda Maleeshiyooyinka PuntLand. Waxaa jira dad badan oo diiddan adeegsiga ay dowladdu adeegsatay ciidamada Itoobiya. Waxaa jira dad aan siyaasad ahaan u qanacsanayn oo u arka inay dowladdu cad quureed siisay ama qadisay. Waxaa jira dad aan dhaqaale ahaan u qanacsanay oo aaminsan inay dowladdu “qarsin-qalloc” ku ridday. Waxaa jira kuwo aan wax nidaam ah rabin oo u diyaara inay dhicsiyaan isku day kasta oo nidaam lugu samaynaayo. Markii intaasoo dhan laysku daro waxaa cad inay meesha imaan karaan dad jecel inay lugta jiidaan “dowladda” iyo saaxiibbadeed.
Maxaa laga filan karaa dagaalkan.??
Waxaa dhici karta in kooxaha iska-caabbintu aysan isi soo mutuxin oo ay u kaadiyaan ciidamada dowladda iyo saaxiibbadood si ay isugu fidiyaan magaalada oo dhan oo ay ugu sahlanaato inay si fudud u dhibaatayn karaan.
Waxaa la hadal hayaa inay suurta gal tahay in hawl-galku uu heli doono taageero xagga cirka ah oo dhinaca Itoobiyaanka (ama Mareykana) taas waxaa xoojinaya ka dib markii ay mareykanku ka dhawaajiyeen in Maxkamadihii ay dib ugu soo ‘duseen’ Muqdisho markii laga saaray ka dib. Arrinkaasu wuxuu ku qasbi karaa kooxaha mucaaradka ahi inaysan si furan isu soo ban-bixin oo ay is-qariyaan markii ay doonaan markii ay doonanna ay geystaan weerarro xanuun badan. Haddii ay taasi dhacdo waxaa hubaal ah in dagaalku uu aad uga dheeraan doono mudada “bihsa” uu saadaaliyey masuulka u hadlay dowladda.
Waxaa aad loo filayaa in ay jiri doonto duqeyn ba’ann oo lala beegsado xaafadaha qaarkood maadaama falsafadda dowladdu ay tahay in la xanuunjiyo dadka si ay isaga saaraan kooxaha dowladda iyo saaxiibbadeed ku kacsan. Waxaa la filayaa inay dowladda iyo saaxiibbadeed ay xaafadaha qaar dadka ku dhaawacma ka hor joogsadaan in la soo gaarsiiyo isbitaallada. Waxaa la filayaa in ciidamda dowladda oo u badan maleeshiyo beeleedyo laga keenay puntland iyo ciidamadii hogaamiye kooxeedyada ee ay maxkamaduhu eryeen, fursad loo siiyo inay dhibaateeyaan xaafadaha qaarkood si ay u noqoto wax ay ku waana qaataan meelaha kale ee ay ka hawl geli doonaan mustaqbalka. Waxaa la filayaa inay dhici doonaan dhacdooyin ku cusub Muqdisho sida is-miidaaminta.
Markii laysku soo duubo waxaa la filayaa : (1) Dad badan oo dhinta , dhaawacma ama barakaca (2) Iyo dowladda iyo saaxiibbadood oo kasbada cadaw-tooyo dheeraad ah oo sii dhimisa(ama daqnisa) nabarro hore iyo cuqdado qabiil oo sii fogeyn doonaa xalka Soomaaliya mustaqbalka dhow iyo kan fogba.
Sida la ogyahay dagaalku (mar kasta) kuma dhamaado sida kuwa huirya ay jecelyihiin. Dagaal xeerarkiisu waxay samaysmaan marka uu billowdo ka dib. Nina guusha iskuma hubo. Nimaan guul-darro xamili karinna guul ma xamili karo! Haddaba ninkii aaminsan in arrinku ku dhamaan doono sidii uu qorsheynayay waxaa la ogaan doonaa inuu khaldanyahay. Labada dhinac dhinac walba wuxuu meel dhigtay taladiisa tii allana waa meesheeda.
Rag tashaday rag kaloo tashaday buu u tegayaaye!
Wallee ina ragow taladu taada uun maaha!!
Muqsiho oo ah “dhashooy” wax badan foolatay (fool xanuun badan), in badanna dhashey wax aan dadkeedu jeclaysan, bal aan ka dhursugno waxay noo hadiyeyso markaan iyo foosheedaan ugu dambaysa!
Waxaan Allah ka baryeynaa inuu guuleeyo dhinaca ay guushiisa dantu ugu jirto umadda islaamka ah ee soomaaliyeed, uuna jebiyo cidda ay jankeeda dantu ugu jirto umadda soomaalyeed!
Wixii aan saxo waxaa i waafajiyey Allah, wixii aan khaldana waa nafteyda aqoonta yar iyo shaydaan!